सडकमा कराउनेहरू आफै चुप लाग्छन्ः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. गोविन्द केसीलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएको भन्दै राजधानीको सडकमा कराउनेहरू आफै चुप लाग्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘जुम्लामा भोकै सुत्न लगाउने र काठमाडौंका सडकमा बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्।’
‘तपाईंहरू नै जीवन बचाउने व्यक्ति हो, डा. केसीलाई मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’
काठमाडौं । चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा